Pentekôsta jiosy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Pentekosta jiosy)
Ny Shavuot (hebreo: שבועות "herinandro") na Pentekôsta na Pentekôty dia fety ao amin' ny jodaisma ahatsiarovana ny nanomezan' Andriamanitra ny Torah tany an-tendrombohitra Sinay na Sinaia sy ankalazana ny fijinjana ny varimbazaha (atao hoe koa "Fetin' ny lohavokatra"). Ankalazaina amin' ny 6 Sivan ny Shavuot.
Festivalin' ny Shavuot eo amin' ny Havoan' i Samoela, 2009.
1 Ao amin' ny Baiboly hebreo
2 Ao amin' ny tetiandro hebreo,
Ao amin' ny Baiboly hebreoModifier
Ny Shavuot izay midika hoe "Fetin’ ny Lohavokatra" koa dia tandreman’ ny Jiosy araka ny voasoratra ao amin’ ny Bokin' ny Eksôdôsy sy ao amin’ ny Bokin’ ny Nomery ao amin’ ny Baiboly hebreo (Eks. 23.16-17; 34.26; Nom. 28.26).
"26 Ary amin'ny andro fanaterana ny voaloham-bokatra, raha manatitra fanatitra hohanina vaovao ho an'i Jehovah ianareo, rehefa afaka ireo herinandronareo, dia hisy fivoriana masina ho anareo; aza manao tao-zavatra akory;"(Nom. 28.26–Ny Baiboly).
Ao amin' ny tetiandro hebreo,Modifier
Ao amin' ny tetiandro hebreo, ny Shavuot dia mizotra ao anatin' ny "fito herinandro feno" na dimampolo andro hatramin' ny ampitson' ny Shabbat (Sabata) (Eks. 33.16), aorian' ny fetin' ny Paska jiosy (Pesakh). Izany no anaovana azy amin' ny teny hebreo hoe שבועות / Shavuot izay adika hoe "fetin' ny herinandro (maro)" sy amin' ny teny grika hoe πεντηκοστos / Pentekostos izay adika hoe "fahadimampolo" teo amin' ireo Jiosy manana kolontsaina grika. Araka ny voalaza ao amin' ny Levitikosy izany (Lev. 23.16).
Avy amin' ny fetin' ny fijinjana izay niova tsikelikely ho fankalazana ny Fanekem-pihavanana natao tao Sinay teo amin' Andriamanitra sy i Mosesy sady fanorenana ny Lalàn' i Mosesy izany. Izany fiovan' ny anton' ny fety izany dia ny faharavan' ny Tempolin’ i Jerosalema tamin' ny taona 70 satria ao amin' ny Tempoly no tokony hanaterana ny fanatitra (ny vokatry ny fambolena).
Tamin' ny fiandohan' ny taonjato voalohany dia nanjary iray amin' ireo fetin' ny fivahiniana masina isan-taona ny Shavuot, indrindra ho an' ny Jiosy manana kolontsaina grika sy ho an' ny sekta jiosy sasany. Tamin' ny taonjato faha-2 vao nampiraisin' ireo mpanaraka ny fampianaran' ny Fariseo ny fetin' ny fijinjana sy ny fahatsiarovana ny Lalàna nomena tao Sinay.
Fetim-pivavahana jiosy: Rosh ha-Shana ("fiantombohan' ny taona"); Yom Kippur ("andron'ny famelan-keloka"); Sukkot ("fetin'ny trano lay" na "fetin'ny tabernakely"); Shemini Atseret ("valo andro fivoriana"); Simkhat Torah ("hafaliana ny amin'ny Lalàna"); Khanukka ("fetin'ny fanorenana"); Tu bi-Shevat ("dimy ambin'ny folo andron'ny Shevat"); Purim ; Pesakh (Paska jiosy); Shavuot ("herinandro").
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentekôsta_jiosy&oldid=1037568"
Dernière modification le 7 Septambra 2021, à 00:34
Voaova farany tamin'ny 7 Septambra 2021 amin'ny 00:34 ity pejy ity.